Atụmatụ nchekwa smart iji chekwaa ego gị - BancaNEO
Atụmatụ nchekwa smart iji chekwaa ego gị
NEO na Satchel na-arụ ọrụ ikike European EMI nke National Bank of Lithuania nyere, nke na-eme ka ego gị chebe oge niile.
Anti-wayo software na usoro usoro
Ndị a bụ otu ihe dị mkpa gbasara nchekwa anyị nwere. Akụrụngwa ahụ, yana usoro nke usoro pụrụ iche, na-enyere anyị aka ịchọpụta ma gbochie ọrụ ọ bụla dị egwu nke nwere ike imerụ ego gị.
Site n'ịkwalite njirimara ihe abụọ, anyị agbakwunyela nchekwa nchekwa na usoro nyocha gị, na-eme ka ọ bụrụ ihe ịma aka maka ndị omempụ cyber iji nweta aka ha na data nkeonwe gị. Ọbụlagodi na a ga-emebi paswọọdụ gị, ọ ka ga-ezuru ịbanye n'ime gị BancaNEO akaụntụ.
Mepee Akaụntụ Onwe
Akaụntụ kewara ekewa
N'okpuru ikikere anyị, iwu ji anyị idebe ego ndị ahịa na akaụntụ dị iche na National Bank of Lithuania. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ewepụ nchegbu ọ bụla dị n'akụkụ gị gbasara nchekwa nke ọnọdụ ego.
Ihe nchekwa 3D
Ngwaọrụ nchekwa a dị elu na-arụ ọrụ oge ọ bụla ị zụrụ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị, na-enyocha ma ọ bụ gị n'ezie n'akụkụ nke ọzọ nke ihuenyo ahụ. Ọ bụ naanị usoro nyocha ọzọ nke na-enye anyị ohere ịme nkwenye azụmahịa gị n'ịntanetị n'enweghị nsogbu.
Anyị etinyela atumatu na njikwa nke na-echekwa nchebe zuru oke nke data onye ọrụ site na iyi egwu site na ịchịisi. Oge ọ bụla gị na anyị na-emekọrịta site na ntanetị, ma ọ bụ rụọ ụdị ọrụ ọ bụla, ị nwere ike ijide n'aka na igwe ojii ahụ na-eche nche.